Flange အခြေခံများ- လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းများ၊ နှင့် ပစ္စည်းများ
လုပ်ဆောင်ချက်များ Flanges များသည် ပိုက်များကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး ပိုက်စွန်းများကြား ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အသုံးပြုကြသည်။reducer flanges ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းနှစ်ခုကြား ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်ရှိ flanges များအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါသည်။( reducer flange ကို connection betw...
စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ သံမဏိအစိတ်အပိုင်းမှိုကို သံမဏိအစိတ်အပိုင်းမှိုဖြင့် ဖြည့်သွင်းထားပြီး နောက်ဆုံးအပိုင်းကို အေးသွားစေရန် သွန်းသောပလပ်စတစ်ဖြင့်ဖြည့်သွင်းသည်။ဤကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် တသမတ်တည်းရှိသော အတိုင်းအတာဖြင့် အစိတ်အပိုင်းအများအပြားကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောနည်းလမ်းကို ပေးဆောင်သည်...
CNC စက်ယန္တရားစင်တာ၊ ထွင်းထုခြင်းနှင့်ကြိတ်စက်၊ ထွင်းထုစက်အကြား ကွာခြားချက်များ
ပြုပြင်ရေးစင်တာ၊ ထွင်းထုခြင်းနှင့် ကြိတ်စက်၊ ထွင်းထုစက် ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။ဒီစက်ဝိုင်းထဲ ဝင်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်း တော်တော်များများ မေးကြလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ စက်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါ နားမလည်တာ၊ ဘယ်လို ခွဲခြားရမှန်းမသိဘူး အဆုံးမှာတော့ ဘယ်လိုမျိုး ဝယ်သင့်လဲ…
သတ္တုပစ္စည်းများ၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် အချက်ရှစ်ချက်
တည်းဖြတ်သူ၏ မှတ်ချက်- ပစ္စည်းများ၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစား၊ မျက်နှာပြင် ပြီးစီးမှုနှင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ၊ ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေ၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ပြင်ပအချက်များနှင့် အတွင်းပိုင်းအချက်များအပေါ် အလွန်ထိခိုက်လွယ်ပါသည်။ .
မော်တော်ကား အဲယားကွန်း ကွန်ပရက်ဆာတွင် ဆူညံသံ မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း။
Abstract- တရုတ်လုပ်ဆလွန်းကားတစ်စီးတွင်၊ လေအေးပေးစက်ဖွင့်ထားသည့်အခါ ကားထဲတွင် ဆူညံသံများစွာထွက်ပြီး ကားအတွင်းတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။တုန်ခါမှုအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေရန်အတွက် ရှေ့ပြေးပုံစံယာဉ်နှင့် ကွန်ပရက်ဆာကို စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ...
PRE သည် မတ်လ EXPO အတွက် ပြင်ဆင်နေပါသည်။
21-03-02 တွင် admin မှ
ဖေဖော်ဝါရီလ 26 ရက်နေ့တွင် PRE သည် မတ်လ EXPO အတွက်ပြင်ဆင်ရန် PK လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။အခမ်းအနားတွင်၊ အရောင်းနှစ်ခုကြားတွင်စွမ်းဆောင်ရည် PK ရှိလိမ့်မည်။သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုပန်းတိုင်ကို ပြီးမြောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့အားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုတွေ ရရှိကြမှာပါ။မယုံနိုင်စရာကောင်းတာက ငါတို့ရဲ့သူဌေး လီလီဟာ ဘယ်တော့မှ မခွဲခွာဘူး...
ဒီနှစ် promotion ရပြီလား?
ယနေ့၊ EBI ၏ 2021 ခုနှစ်၏ ပထမဆုံး ပရိုမိုးရှင်းအခမ်းအနား စတင်ပါပြီ။သတ္တိရှိပြီး ဇွဲလုံ့လရှိသူတိုင်းကို အချိန်က လစ်လျူရှုထားမည်မဟုတ်ပါ။ဘယ်သူကမှ ကံတရားက အပြာရောင်ကနေ ထွက်မလာဘူး။လုံလုံလောက်လောက် အလုပ်ကြိုးစားမှသာလျှင် ငါတို့ကံကောင်းလိမ့်မယ်။EBI သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ဇွဲရှိမှုတိုင်းကို လိုက်နာမည်မဟုတ်ပါ။ပိုကောင်းတာကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်...
မော်တော်ကားလေအေးပေးစက်အတွက် အပူချဲ့ထွင်မှုအဆို့ရှင်၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ
အတွင်းချိန်ခွင်လျှာအမျိုးအစားအပူချဲ့ထွင်မှုအဆို့ရှင်၏ညှိနှိုင်းမှုနိယာမ 1-Needle အဆို့ရှင်;2-အပူလွန်ကဲသောနွေဦးရာသီ;3-ညှိနှိုင်းမှုဝက်အူ;4- Diaphragm;5-Putter;6-Capillary;7-Evaporator;8- စိုစွတ်သော ရေနွေးငွေ့ အပိုင်း;9- အပူလွန်ကဲခြင်း ရေနွေးငွေ့အပိုင်း;10- Temperature wrap မှတ်ချက် 1- အပူချိန် အပူချိန် wra...
သင့်အဖွဲ့အတွက် နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ရေးက ဘယ်အချိန်မှာလဲ။
သင်ယူမှုနှင့် လေ့ကျင့်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အရေးကြီးသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန် EBI သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမိုကျွမ်းကျင်သော အသိပညာများကို လေ့လာသင်ယူရန် အနှစ် 20 လုံးလုံး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းလုပ်နေသည့် Monica ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။မနက် ၉း၀၀ မှ ည ၈း၀၀ နာရီအထိ စုစုပေါင်း နှစ်ရက်ကြာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ စူးစမ်းဖို့...
ဒါဟာ နှစ်စဉ် ခရစ္စမတ်ပါ။ဒါဟာ EBI ရဲ့ ပါတီပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်က အရမ်းလှပါတယ်။ သစ်ပင်ကို ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဆန္ဒကတ်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပြီး အားလုံးရဲ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်!!စမ်းကြည့်ရအောင်...
ယွမ် သန်း 100 ကျော်၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ PRE လည်ပတ်မှုကို ဂုဏ်ပြုရန်
admin မှ 20-12-16 ရက်နေ့တွင်
2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ3ရက်၊ 2020 ခုနှစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ 100 သန်း ယွမ်သန်းကျော်၏ PRE လည်ပတ်မှုကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် PRE အတွက် သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ဤနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် RMB သန်း 100 ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။PRE လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အရမ်းခက်တယ်!!ကပ်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦးတည်ချက်ကို ချက်ခြင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲ၊ ဗျူဟာပြောင်းရန်၊ ...
28လွှာ၊အပိုင်း A၊ Yunzhongcheng၊ No.3399 Ziyang Avenue၊ Nanchang၊ Jiangxi၊ China၊ 330072။
©Prototek 2018-2022Hot Products များ, ဆိုက်မြေပုံ, AMP မိုဘိုင်း
စျေးသက်သာသော Cnc ဝန်ဆောင်မှု, Cnc အလှည့်ကျ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ, Cnc တိကျမှုအစိတ်အပိုင်းများ, Cnc အစိတ်အပိုင်းများရောင်းရန်ရှိသည်။, Cnc ပေးသွင်းသူ, Cnc Spindle အစိတ်အပိုင်းများ,